Wixhc Teknolojia – Mpitarika ny indostria
Izy io dia misy vondrona matihanina mafana fo izay tia orinasa CNC. Ireo injeniera teknika lehibe sy mpanolo-tsaina amin'ny varotra dia manana mihoatra ny 10 taona niainan'ny indostria.
Mifantoka amin'ny sehatry ny fampitana Wireless sy ny fanaraha-maso ny hetsika mihoatra ny 20 taona, manompo mpanjifa an'aliny amin'ny indostrian'ny CNC toy ny fanaraha-maso lavitra any amin'ny indostria, finday elektronika tsy misy tariby, sns.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa dia nanolo-tena ho amin'ny fampandrosoana ny hetsika fanaraha-maso mihetsika mifanaraka amin'ny filozofia orinasa ny “matihanina, feno fanoloran-tena sy mihaino”.
Amin'ny fitaovana milina CNC, feon'ireo, vato, metaly, fitaratra sy indostrian'ny fanodinana hafa, nahangona olana isan-karazany an'arivony mpanjifa izany mihoatra ny 40 firenena eran'izao tontolo izao.
rafitra cnc tafiditra
Ny sandan'ny vokatray
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa malaza sy mpiara-miasa teknika manerantany, manohy manavao ny teknolojia izahay, mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo tombony bebe kokoa ary manampy ny mpanjifa hahita fahombiazana bebe kokoa amin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalana.
Jereo ny sandan'ny vokatra
Ny vokatra Wixhc dia amidy tsara mihoatra noho ny 40 firenena sy faritra manerana an'izao tontolo izao. Manamora ny mpanjifa, nanangana tranokala fiteny maro samihafa izahay 117 firenena sy faritra. Ho tsara kokoa ny ho avy.
Kitiho raha hijery, ny tranonkala ofisialin'ny foiben-toeran'ny Wixhc amin'ny teny sinoa tsotra.
Mifantoha amin'ny fifindran'ny Wireless sy ny fanaraha-maso ny hetsika 20 taona
Vakio ny momba anay
Wixhc no mpitarika manerantany amin'ny Wireless sy CNC
Manome teknolojia avo lenta ny mpanjifanay, mora, vokatra avo lenta sy azo antoka, vahaolana sy serivisy amin'ny indostrian'ny milina CNC, feon'ireo, vato, metaly, fitaratra sy indostrian'ny fanodinana hafa.
Wixhc dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra R & D, famokarana sy varotra, mifantoka amin'ny fampitana angon-drakitra tsy misy tariby sy fikarohana momba ny fanaraha-maso ny hetsika mihoatra ny 20 taona.
Izahay dia manolo-tena amin'ny fanaraha-maso lavitra indostrialy, finday elektronika tsy misy tariby, Fanaraha-maso lavitra CNC, karatra fanaraha-maso, Integrated CNC rafitra sy ny saha hafa.
Manana fiaraha-miasa misokatra amin'ny mpiara-miombon'antoka ara-tontolo iainana izahay mba hamoronana lanja tsy tapaka ho an'ny mpanjifa, mamoaka ny mety tsy misy tariby ary manentana ny fanavaozana ny fandaminana.
Ny R & D ekipa
Manana paikady fampandrosoana mazava ny orinasa, fanavaozana ny vokatra, modely ara-barotra mahomby, ary kolontsaina ekipa samihafa. Namorona andiana rafitra sy mekanika vaovao izy io, manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana vaovao ary fahaiza-manao fikarohana sy fampandrosoana matanjaka, ary manome antoka mafy ho an'ny vahaolana sy vokatra CNC.
Ataovy azo antoka ho mety aminao ny vokatra
Vetivety ny Productanay, mahia, ary mifantoka amin'ny tsena.
Nahangona fampiharana mahazatra mihoatra ny 40 firenena, mihoatra ny 150 indostria sy mpanjifa an'arivony manerantany. Araka ny tena filan'ny mpanjifa sy ny valin'ny fampiharana, izahay dia manatsara hatrany sy manatsara ny vokatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Azontsika atao ny manamboatra vahaolana sy vokatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
MISY MILA, CROSS PLATFORM, KROSY USER
Avy amin'ny fampiharana azo ampiharina.
Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny fampidirana ny teknolojia patanty fototra sy ny fanatrarana fiainana vaovao! Angony ny teknolojia fototra indrindra, ampiharo amin'ny vahaolana sy vokatra izy ireo, ary manao ezaka tsy an-kiato ho amin'ny fiainan'ny mpiara-miombon'antoka ara-tontolo iainana sy ny mpiasa.
Wixhc dia manolo-tena ho lasa orinasa CNC lehibe indrindra eran-tany, mahatonga azy io ho orinasa azo itokisana indrindra eran-tany.
Mba hiantohana ny fiarovana sy ny kalitao azo antoka amin'ny fizotran'ny famokarana, manana fomba fiasa tonga lafatra sy torolalana fampandehanana izahay, ary manaraka tanteraka ny fizotran'ny famokarana.Ny vokatra sy ny serivisy nandalo ISO9001.
Manana ny teknolojia patentinay manokana izahay, andiana vokatra maromaro, malalaka amin'ny famolavolana vahaolana.Industrial fanaraha-maso lavitra, kodiarana tanana elektronika tsy misy tariby, Fanaraha-maso lavitra CNC, karatra fanaraha-maso, Integrated CNC rafitra, sns.
CNC indostria famokarana sy varotra R & D mihoatra ny 20 taona, miaraka amin'ny teknolojia patentina am-polony, tambajotra ara-barotra manerantany, manome tolotra matihanina 24 ora.
Raiso any amin'ny ambaratonga manaraka ny orinasanao
Aiza no misy ny fanaraha-maso ny hetsika, misy vokatra Wixhc. Lasa iray amin'ireo marika manan-danja indrindra eo amin'ny sehatry ny CNC isika, tsy mitsahatra mamorona ny sanda lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny mpampiasa vola.Mandehana miaraka amin'ny fampandrosoana ny drafitra lehibe.Raha mila zavatra ianao, azafady mba mifandraisa aminay. Fampandrosoana sy fandrosoana iombonana.
Vakio bebe kokoa momba anay
Vao haingana, nahazo teknolojia patanty maro ny orinasa. Nanao fandrosoana vaovao izahay miaraka amin'ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa, fampiharana sy fanavaozana ny vokatra, ary miroso tsikelikely mankany amin'ny fenitra ambony kokoa.
Fanambarana ofisialy丨 Chengdu Wixhc Technology Co., Ltd. Nifindra tany amin'ny Lohasahan'i LINDO U
xinhecheng2022-03-04T14:48:55+08:004 martsa, 2022|News|
In 2022, amin'ny fiandohan'ny taona vaovao,Ny Wixhc koa dia nampiditra ny hafaliana amin'ny fanofana trano.Ny biraon'ny orinasa
Tsy asa fotsiny ny fiainana, fa andian'olona karnavalika koa — tsarovy Longquanyi Peach Day Trip
xinhecheng2020-01-08T16:11:50+08:0010 Jolay, 2019|News|
Tsy asa fotsiny ny fiainana, fa koa vondron'olona karnavaly orinasa
Mariho ny momba ny fanovana ireo sticker SWGP
xinhecheng2020-01-08T16:12:10+08:0023 aprily, 2019|News|
Mariho ry mpanjifa malala: Misaotra anareo amin'ny fahatokisana sy fanohanana anay rehetra
Wow – Tsy hitako izay holazaina hafa. Ity no vokatra tsara indrindra hitako hatramin'izay. Izaho no lehiben'ny injeniera ao amin'ny orinasa iray vondrona, ary nahagaga ahy ity vokatra ity.
Ny ekipa Wixhc dia manome fanohanana tsara, mihaino ny mpampiasa azy & miasa hatrany amin'ny fanatsarana ny vokatra.
Stephen Cronin, CTO an'ny orinasa CNC malaza iraisam-pirenena
Join The 10,000+ Afa-po ny mpanjifa!
MIVIDY Wixhc izao!
Ny teknolojia Wixhc dia nampiasaina tamin'ny fifindrana tsy misy tariby sy ny fanaraha-maso ny fihetsiketsehana mihoatra ny 20 taona, manangona fampiharana samihafa amin'ny orinasa an'aliny erak'izao tontolo izao.
Manana teknolojia patanty am-polony sy ekipa R&D izahay, izay afaka manamboatra sy mampivelatra ireo vokatra mifandraika amin'ny hardware sy rindrambaiko mifandraika amin'ny CNC.
Fampandrenesana ny fananganana foibe fiantsoana feo mahay
Mavesatra! Wixhc dia mahatratra ny fiaraha-miasa stratejika amin'ny American ArtSoft (Mach3)!
trano 1, tsy misy. 1919, Lalana Shuangyan, Distrika Wenjiang, Chengdu, Sichuan, Shina
Web: Wixhc Teknolojia
Multi-switch indostrialy Wireless remote controlDH05 DH05 £550.00
Fikosoham-bary indostrialy automatique fanaraha-maso lavitra DH22-2R-7K £260.00
mahery anti-interference Mora ampiasaina - mahery anti-interference Mora ampiasaina £650.00
© Copyright 2001 - | Wixhc Teknolojia nataon'i Wixhc | Zo rehetra voatokana | Ampandehanin'i Wixhc
Mpitarika amin'ny indostrian'ny CNC izahay, manokana amin'ny fandefasana tsy misy tariby sy ny CNC Motion Control mihoatra ny 20 taona. Manana teknolojia manana patanty am-polony izahay, ary ny vokatray dia amidy tsara mihoatra ny 40 firenena eran'izao tontolo izao, manangona fampiharana mahazatra efa ho 10000 mpanjifa.
Use Conditional Logic with the #misokatra Form Builder to create #Marketing, lead capture, survey, contact forms, etc.… twitter.com/i/web/status/1...
ny #misokatra #WebsiteBuilder right-click feature has a ton of options & is regularly overlooked. It can improve your… twitter.com/i/web/status/1...
Misoratra anarana hahazoana ny vaovao farany sy ny vaovao farany. Aza manahy, tsy handefa spam izahay!